Home Wararka Kenya oo markii u horeeysay saldhig ciidanka cirka ka dhistay Gaarisa
Kenya oo markii u horeeysay saldhig ciidanka cirka ka dhistay Gaarisa
Dowlada Kenya oo dhawaalahan danbe waday qorshe lagu casriyaynaya ciidamada dalka Kenya ayaa waxa ay hada ka furtay gobolka Soomaalida degto ee Gaarisa saldhic ciidan oo cusub. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta magaalada Gaarisa ka furay saldhig cusub oo ay yeelanayaan ciidamada cirka ee dalkaas.
Sida uu sheegay madaxweynaha Kenya, Saldhigaan ayaa noqon doona midka ugu weyn ee ciidamada cirka dalka Kenya ay leeyihiin, lagana ilaalin doono ammaanka guud ee dalka Kenya. Xaruntan oo sidoo kale noqon doonto mid ay isticmaalaan ciidamada kale ee dalka Kenya ayaa u jirta magaalada Garisa illaa 15km.
Dhismaha saldhiga ayaa ku soo aadayo iyada oo dowlada Kenya dar-dargalisay dagaalka ka dhanka ah ururka Argagaxisada Al Shabaab. Mas’uuliyiinta Kenya waxay sheegeen in saldhiggan cusub uu qayb ka qaadan doono la dagaalanka ururka Al-Shabaab, oo weeraro badan ka fulisay gobolka Waqooyi Bari. Ururka Al-Shabaab ayaa dhowaan ka fuliyay howlgal milatari meel aan ka fogeyn saldhiggaas iyagoo ku gubay isbitaal.